Food and Beverages | Super Light Logistics
Makeacall to SL Hotline to startabusiness with us or more detail information you would like to know.
Food & Beverage လုပ်ငန်းများအတွက်လည်း နေ့စဉ် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ၏ သယ်ယူပို့ဆောင် ဖြန့်ဖြူးရေးအပိုင်းတွင် လျစ်ဟာမှုမရှိစေရန် Super Light Logistics မှ ဝန်ဆောင်မှု ပေးလျက်ရှိပေသည်။
Logistics နှင့် ပတ်သတ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအားလုံး ယုံကြည်စိတ်ချရသည့် ကျွမ်းကျင် ဝန်ထမ်းများမှ ဆောင်ရွက်ပေးနေသောကြောင့် စိုးရိမ်ကြောင့်ကျမှု ကင်းဝေးစေရမည်
Minimized work function
Logistics & Supply Chain နှင့်ပတ်သတ်သမျှ ကဏ္ဌအားလုံးတွင် လုပ်ငန်းတာဝန်များ သိသိသာသာ လျော့နည်း သက်သာစေရမည်
မျှော်လင့်ထားသည်ထက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဝန်ဆောင်မှုများကြောင့် အစဉ်ထာဝရ ပျော်ရွှင်စေရမည်
ကုန်ကျစရိတ် သက်သက်သက်သာသာဖြင့် ရင်းနှီးငွေများ အချိန်တိုအတွင်း အခက်အခဲ အတားအဆီးမရှိ ပြန်လည်ရရှိ စေရမည်
လူကြီးမင်းတို့၏ ကုန်စည်များအပေါ် အပြည့်အ၀ အာမခံမှု၊ တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှု ရရှိစေရမည်
Our Valuable Clients & Brands
ကျွန်တော်တို့ Super Light Logistics အနေဖြင့် ပြည်တွင်းစီးပွားရေး လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း (Land Transportation) ကို အရည်အသွေးပြည့်ဝသော ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများနှင့် အဆင့်မီကုန်တင်ယာဉ်များဖြည့်စွက်ကာ ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက် ရှိပါသည်။ အာရှ၊ဥရောပနိုင်ငံ အသီးသီးမှ ကုန်ပစ္စည်းများကို လေကြောင်း၊ ရေကြောင်း၊ နယ်စပ် စသည့်ဖြင့် မည်သည့်Transit နှင့်မဆို တင်သွင်း ဖြန်းဖြူးရောင်းချနိုင်ရန် ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်။
Super Light logistics အနေဖြင့် မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအတွက် အကောင်းဆုံးသော ကုန်သွင်း၊ ကုန်ပို့ ဝန်ဆောင်မှုများကို ဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကို ပြည်ပသို့ တင်ပို့လိုလျှင်ဖြစ်စေ၊ ပြည်ပမှ ကုန်ပစ္စည်းတွေကို မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း သို့ ပို့ဆောင်တင်သွင်းလိုလျှင် ဖြစ်စေ လုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအား Super Light Logistics ဧ။် ကျွမ်းကျင်၊ ဝါရင့် agent များမှ လိုအပ်ချက်မရှိအောင် အထူးအာမခံ ဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိပါသည်။
Super Light Logistics ၏ သိုလှောင်ရုံများသည် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား မျိုးစုံအတွက် အလွန် အဆင်ပြေလွယ်ကူစေမည့် multi-user storage system ၊ နောက်ဆုံးပေါ် warehouse support equipment များကို အသုံးပြုထားပြီး Customer တိုင်းအတွက် အပြည့်ဝဆုံး Warehousing service ကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်အောင် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားပါသည်။
Super Light Logistics ၏ ကုန်စည်ဖြန့်ဖြူးမှုစင်တာကြီးသည် ရန်ကုန်မြို့နယ်တွင် တည်ရှိပြီး ၊ မြန်မာနိုင်ငံ တစ်ဝန်းလုံးသို့ အချိန်နှင့် တပြေးညီ ပို့ဆောင်ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးလျက်ရှိပါသည်။ မန္တလေး ၊ မော်လမြိုင် နှင့် ရန်ကုန်မြို့နယ်ကြီးများတွင် ပင်မ ကုန်စည်ဖြန့်ဖြူးရေးစင်တာကြီး (၃)ခု ဖွင့်လှစ်ထားပြီး လူကြီးမင်းတို့၏ Supply Chain လုပ်ငန်းရပ်ကြီးတစ်ရပ်လုံးအား ပိုမိုလွယ်ကူလျင်မြန်စေရန် ဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့ အဆင့်သင့်ဖြစ်လျက်ရှိနေပါသည်။
Export/Import လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လိုသည်၊ သို့သော် ကုမ္ပဏီ လိုင်စင် မရှိသေးဘူး။
• မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ ၊ကုန်စည်များတင်သွင်းရန် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနရှိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနတွင် နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မှုဆောင်ရွက်သောကုမ္ပဏီအဖြစ် ပထမအဆင့် လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင် ရပါမည်။ မှတ်ပုံတင် သက်တမ်းမှာ ၅ နှစ်ဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် တင်သွင်းသူတစ်ယောက်သည် စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနတွင် တင်ပို့သူ/တင်သွင်းသူအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ရမည်။ မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းသည် ၃ နှစ် ဖြစ်သော်လည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်သက်တမ်း (သို့) သက်တမ်းလက်ကျန်ထက်ကျော်လွန်၍ ခွင့်မပြုပါ။ မှတ်ပုံတင်ကြေးမှာသက်တမ်း ၁ နှစ်အတွက် ကျပ်- ၅၀,၀၀၀ ဖြစ်ပါသည်။
•	တင်သွင်းသူသည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ကုန်သည်များနှင့်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင် များအသင်းချုပ် တွင်လည်းအသင်းဝင်ရပါမည်။
•	နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မှုကိုဆောင်ရွက်ရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံသားကိုသာလျှင် ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုပါသည်။ နိုင်ငံခြားသားနှင့်နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများအတွက် နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မှုဆောင်ရွက်ရန် မြန်မာနိုင်ငံသားကုမ္ပဏီများနှင့် Joint Venture ဆောင်ရွက်ရန် သီးခြားကြေငြာချက် ထုတ်ပြန်၍ ခွင့်ပြုလုပ်ကိုင်စေပါသည်။ သို့သော် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအောက်တွင် မှတ်ပုံတင်ထားသောနိုင်ငံခြားကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် သွင်းအားစုသွင်းကုန်များတင်သွင်းခြင်းအတွက် ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားပါကနိုင်ငံသားဖြစ်ရန်မလိုအပ်ပါ။
Custom Clearance ပြုလုပ်ရန်အတွက် မည်သည့်စာရွက်စာတမ်းများ လိုအပ်ပါသလဲ
1. Import license (Original)
2. Invoice & Packing list (Original)
3. Sale contract (Original)
4. Company registration set (Original)
5. UMFCCI member card (Copy)
6. Export/Import license (Copy)
7. Shipping documents set (Original)
To import goods into Myanmar,acompany must provide an import declaration form called CUSDEC—1 Import Declaration Form as well as the CUSDEC—4 Customs Valuation Form. Importers require these additional documents:
• Import License; (Original)
• Invoice; (Original)
• Bill of lading, air consignment note, or truck note; (Original)
• Cargo release order; (Original)
• Terminal handling report; (Original)
• Packing list; (Original)
• Technical standard and health certificate (when required) and;
• Recommendation from concerned ministry (when required).The importer must present these documents to customs officials when imported goods arrive in Myanmar.
To export goods from Myanmar,acompany must provide an export declaration form called CUSDEC—2 as well as the CUSDEC—4 Customs Valuation Form. Exporters require these additional documents: Export license; (Original)
• Bill of lading; (Original)
• Sales contract; (Original)
• Shipping instructions; (Original)
• Letter of credit or general Remittance or Exemption Certificate; (Original)
• Sample of goods;
• Fumigation certificate (when required);
• Phytosanitary certificate (when required)
• Recommendation from concerned ministry (when required).
The exporter must present these documents to customs officials before exported goods leave Myanmar.
အလျင်အမြန် သယ်ယူပို့ဆောင်ပေးရမည့် အရေးကြီးကုန်ပစ္စည်းများအား မည်ကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်ပေးပါသလဲ။
ပထမဆုံးအနေဖြင့် လိုအပ်သောစာရွတ်စာတမ်းများ ပြည့်စုံမှု ရှိ၊ မရှိကို Super Light Logistics မှ စစ်ဆေးပေးပါတယ်။
•	ပြည့်စုံမှုရှိလျှင် လိုအပ်သည့်နေရာသို့ ကုန်ပစ္စည်းများအား အမြန်ဆုံး သယ်ယူပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။
•	ပြည့်မရှိလျှင် စာရွတ်စာတမ်းများပြည့်စုံရန် လိုအပ်သည်များကို စနစ်တကျဆောင်ရွတ်ပေးပြီး သတ်မှတ်ချိန်ထက် နောက်မကျစေဘဲ အချိန်မှီ ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။
ကုန်ပစ္စည်းများ သယ်ယူပို့ဆောင်ရာတွင် မည်ကဲ့သို့သော အာမခံများထားရှိ ထားပါသလဲ၊ ကုန်ပစ္စည်း ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာပါက မည်ကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်ပေးပါသလဲ။
ကုန်ပစ္စည်းများအား အလုံးစုံ အာမခံထားရှိပြီး ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများအပေါ်တွင် အပြည့်အ၀ တာဝန်ယူ ဖြေရှင်းပေးပါတယ်။
ကုန်ပစ္စည်းများ သယ်ယူပို့ဆောင်ရာတွင် သတင်းအချက်အလက်များ အချိန်နှင့်တပြေးညီ ရရှိအောင် မည်ကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်ပေးပါသလဲ။
ကုန်ပစ္စည်းများသယ်ယူပို့ဆောင်ရာတွင် လုပ်ငန်စဉ် အဆင့်ဆင့် နှောင့်နှေး ကြန့်ကြာမှုမရှိစေရန် သတင်းအချက်အလက်များအား အချိန်နှင့်တပြေးညီ သိရှိနိုင်ရန် Phone, Viber, Email များအပြင် GPS System, ERP System များဖြင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွတ်ပေးလျက် ရှိပါတယ်။
ကုန်ပစ္စည်း ပမာဏနည်းပါးလျှင် ဝန်ဆောင်မှု ပေးပါသလား။
ပေးပါတယ်။ Customer များ စိတ်ကျေနပ်မှုရရှိရေးနှင့် ရေရှည် လက်တွဲနိုင်ရေးသည်သာလျှင် ကျွန်တော်တို့ Super Light Logistics ဧ။် အဓိက လိုလားချက် ဖြစ်ပါတယ်။
ကုန်လှောင်ရုံမှ နောက်ဆုံးလိုအပ်သောနေရာအထိကော ပို့ဆောင်ပေးပါသလား။
ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်၊ ဆွေးနွေးအကြံပြုပေးချင်းမှသည် နောက်ဆုံးပန်းတိုင်အထိ ဝန်ဆောင်မှုပေးပါတယ်။
So pickaphone and makeacall to SL Hotline to startabusiness with us or more detail information you would like to know.